Afrika: Qaarad Qani ah oo Kheyraadkeeda Ka Baahan yahay(Qeybta 2-ad ,Daawo) | waamonews
Sidaan horeyba idiinku sheegnay Afrika waa Qaarada ugu Qanisan guud ahaan dunida ,Marka la qiimeeyo Kheeyraadka ay kulan satay, Sida, Cimilada diiran ee dhex dhexaadka ah, Duur Joogta Allah ugu deeqay ee kala nooca ah, Bad iyo bari Kheyraadka dhex ceegaagayo, Sida, Shiidaalka, Miniraalka, Macdanta,Dahabka, Dhaymanka iyo Luulka, dhul dabiici ah oo beerashada ku haboon iyo wax soo saarka, Koronta dabiici ah oo laga dhalin karo Cadceeda, Hawada ,biyaha iyo waxii lamida.
Wadamada dunida koobaad maanta isku tilmaamay ee hormaray, waxay ku hormareen inta badan waa maskax.
Balse Afrika waxaa la haray waa Madax Maskax ku filan laheyn oo arigtidoodu dhaafsaneyn kursiga ay ku fadhiyaan labadiisa lugoo dhexdooda. Madaxweyna kasta oo Afrika soo marana waxuu ku fikiraa siduu nus qarni kursiga ugu sii fadhin lahaa, isagoon dan ka laheyn hormarka dalka intiisi kale.
Wadamada daldasho Kheyraadka Afrika ,iyaguna dadka Afrikaanka waxay ka dhaadhiciyaan in ay yihiin dal gaajo ah oo liidan isla Markaasina waxay u tuuraan sandareero yar oo looga badalanayo Balaayiin Kheyraad ah. Waxaa hubaal ah in ilaa iyo haatan ay dihantahay Qaarada Afrika hadii wadamada Afrikanka ay la yimaadaan Maskax iyo Aragti dheer si looga Faa’iideysto Kheyraadkaasi.
Hadii Madaxda Afrika ka shaqeyn lahaayeen Hormarka iyo Nabad Gelyada Gobalka waxaa hubaal ah in Afrika ay noqon laheyd Qaarada ugu hodan san dunida isla markaasina ugu dhaqaalaha badan, mana aysan dhacdeen in sanad walba Balaayin afrikan ah ay ku dhintaan Dagaalo, Tahriibka badaha , Gaajo iyo Cuduro. Iyagoo nolol ka raadsanaya wadama ay ku dhisan Kheyraadka ay ka dhacaan Qaarada Afrika, Malaha nasiib dara ka weyn inaad garan weyso Barwaaqada Gurigaaga taalo ood gacan u hoorsato luflufka wadan kale oo maskaxdiisa iyo kartidiisa ku gaaray inuu kugu masaruufo Kheyraadka uu dhulkaada ka soo qaatay.
Madaxda Afrikaan waxaa muhiim ah inay midoobaan isla markaasina ay ka shaqeeyaan hormarinta Qaaradooda Hodanka ah ee Afrika ,kana hortagaan in shirkada shisheeye ay ka dhex holciyo dagaalo Ahli ah iyo mid diimeed oo dana laga leeyahay si Afrika baaqi ugu sii ahaato dagaalada iyo gaajada.
Dhul cimila wanaagsan leh, Xeebaha aduunka ugu quruxda badan ee loo dalxiistago, Xayawaan lagu ildoogsado oo loo soo daawashatago, Kheyraad aan la soo koobi karin inta dunida taalo kuli Afrika ayaa kulansatay.
Ugu dambeyn hadii Afrika Kheyraadkeeda ka faa’iideysato waxaa hubaal ah in ay qaxooti ahaan u qaabili laheyd wadamada haatan ku tilmaaman Dunida koowaad.